Ogaden News Agency (ONA) – OYSU PACIFIC Dadaalkay wadaan oo midho dhalay guulana soo hooyay
OYSU PACIFIC Dadaalkay wadaan oo midho dhalay guulana soo hooyay
Jaaliyadaha Somalida Ogadeniya ayaa waxa ay ka koobanyihiin Ururo bulsho oo leh urur haween, Urur dhalinyaro, Ururo Xuquuql Insaan, hayado Samafal, Haayado cilmibaadhis, Culuma-u’diin, duqey iyo Aqoonyahan. Kuwaas oo dhamaan waax kastaaba shaqooyin gooni ah qabtaan kuwaas oo dhamaantood ka dab-qaata oo hoos taga maamulada Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Magalada ama gobolka ay ka howlgalaan.
Hadaba waxa maanta aan soo qadanayna Ururka Dhalinyarada iyo ardeyda Somalida Ogadeniya ee Jaaliyada Ogadeniya ee ka howlgala Qaarada ‘Pacific’ OYSU PACIFIC.
OYSU PACIFIC waxa ay ka koobanyihiin oo ku bahoobay Ururada dhalinyarada ee Wadanka Australiya gaar ahaan magaloyinka Melbourne, Perth, Sydney, Brisbane, iyo Wadanka Malaysia (kuala Lumpur) iyo Hamilton Newzealand.
Dhalinyartan ayaa ku bahoobay Magaca OYSU PACIFIC iyaga oo nidaam ahaan ka tirsan Jaaliyadaha magaalada ay joogaan ayaa urur ahaan waxa ay shaqo bahwadaag ah leeyihiin Ururka guud ee dhalinyarada Somalida Ogadeniya ee OYSU (World Wide). Waxa ayna ku biireen midowga dhalinyarada Somalida Ogadeniya ee OYSU sanadkii 2010 waqtigaas oo Dhamaan ururada dhalinyarada ee wadamada kaladuwan ka jiray isugu yimadeen wadanka Denmark halkaasna lagu ansixiyay Magaca bahwadaaga midwoga OYSU.
Mudadaas ka hor Ururkan Dhalinta ee Australiya ama Pacific waxa uu ahaa urur sii jiray oo waliba firfircoon shaqoyin badana ka fuliyay wadanka Australiya. Waxaana ka mid ahaa Ruwayadihi caanka ahaa ee ay ka hirgaliyeen wadanka Australia. Ururkan ayaa ah ururki labaad ee dhalinyarada Somalida Ogadeniya yeeshaan ee wadanka dibadiisa Laga Aasaaso iyada oo udbihiisa la tataagay sanadkii 2007.
Hadaba Ururka OYSU Pacific oo laba sanadood kasoowareegtay mudadii uu bahweynta midowga OYSU ku biiray ayaa waxa shaqooyinkii ururkan qabtay ay noqdeen shaqooyin lagu faano. waxa uuna baalka hore ee dahabiga ah ka galay Ururada Dhalinta Ogadeniya ee qaaradaha Kala gadisan ka howlgala.
Waxaa aan halkan kusoo koobayna Shaqo wanaaga iyo tayada sare ee Ururka OYSU Pacific anaga oo soo koobikarin waxqabadka uu ururkan hirgaliyay ayaa qodobo aan isleenahay waa kuwa ugu muhiimsan aan hoos kusoo koobayna.
1. Ururku Waxa uu sameeyay oo uu ku guuleystay “MEDIA AWARENESS”
Waxa ururku uu xooga saaray sidii Wadanka Australiya, Newzealand iyo Malaysia uu uga hirgalin lahaa in Qadiyada Ogadeniya ay gasho Mediaha wadankaas. Waxayna si hoose u bilaabeen inay xidhiidho la yeeshaan Ururada aan dowliga ahayn, Sida Hayadaha caawiya Jaaliyadaha, Ururada “Local governments” ku jira sida Duqa magalada, Councilar-ada heer deegaan, Ururada bulshada ee heer deegaan. Kuwaas oo u saamaxay in ladhiso xidhiidh hoos ka dhisan oo udub dhaxaad adag ku taagan.
Waxa dabadeeto ururku bilaabay in shirar ay qabtaan kuna casuumaan Haayadahaas kala gadisan ee Heer dagmo illaa heer wadan dabada isheysta. Waxaana ay kulamadaas casharo ku siiyeen marti sharafta ay soo casumaan inay si qotto dheer u baraan qadiyada Ogadeniya waxay tahay. Dhibaatada gumeysi ee umadaas haysata, iyo sida looga hortagi karo casharo ku aadan oo si xirfadeesan loo soo aggaasimay ayaa ay siiyeen ururadan bulsho iyo kuwa Deegaanba illaa heer markii danbe abaabulkan uu gaadhay Dowlada Wadanka Australia iyo Mediaha sida TV-yada wadankaas iyo idaacadaha waaweyn ee australia.
tusaale ahaan Safarkii Cabdi UBO ku tagay Australiya iyo madaxdii TPLF ee la socotay waxa keenay inay fashilmaan, oo albaabada loo soo laabo shirarki ay raajicinayeen inay ku qabtaan Australia waxa uu ahaa dhaq-dhaqaaqa Dhalinta oo kamid ah waxyaalaha Jaaliyada Australiya ku faanto. Waxaana Albaabada loo laabay oo laga burburiyay lagana xidhay shirarkii ay qabsan lahaayeen Gumeysiga Ethiopianku iyada oo waliba laga iclaamiyay TV-yada waaweyn ee Wadanka Australiya laga leeyahay. TV-yada ayaa sheegay in wafdi Ethiopian ah goobta yimid balse Albaabada laga xidhay lagana burburiyay kulankoodi oo uusan hirgalin, kadib markii shacab-kasoo horjeeda ay goobta yimadeen farahana la isulatahay.
Waxaa xasuus mudan in Cabdi UBO Ilaahay u bixiyay Poliska wadankaas oo inyar uu ku sigtay in goobtaas lagu aaso. sawirkisina waati mediaha lagu shaaciyay isaga oo Tunka lahayo Tuug laqabtay xeelad malaha.
TV-yada iyo warbaahinta Australiya ayaa waxa kusoo xidhay goobta ururada Bulsho iyo kuwa heer deegaan illaa wadan ee ururka OYSU hirgaliyay inay taagero u noqdaan qadiyada Ogadeniya. Hadaba qaabke ayay dhalinta OYSU u hirgalisay arrimahaas.
Dhalinyartu iyaga oo khidado kala gadisan isticmalaya oo lagu kasban karo bulshada ree Australiya Waxa ay Casharo ka bixiyeen Jaamacadaha iyada oo ardeyda lasiinayo, sidoo kale waxaa laga bixiyay munasabado gooni ah oo wata magacyadan:
Ogaden Massacre Day:
Waxaa dhalinta iyaga oo dhana kaxusaya tacadiyada iyo xasuuqa shacabka Somalida Ogadeniya loo geysto ee Joogtada ah ay hadana uga faa ideysteen in Media Awarnes ahaana u dhexgaliyaan bulshada wadankaas. Iyaga oo Shirweyne qabtay ay kusoo bandhigeen musawiraan iyo Filimo ka hadlaya xasuuqa Ogadeniya. Waxa kulamadan lagu casuumay Haayadaha aan dowliga aheyn iyo kuwa heer deegaan illaa heer magalo ama wadan iyo masuliyinta iyo xubno badan oo u dhashay wadanka Australiya, kuwaas oo casharo ahaan loo siinayo xaqiiqda ka jirta Ogadeniya. si ay iyaguna u sii faafiyaan dhibatada Ogadeniya ka taagan.
Waxa hadaba dhacday in Dadka kulamada kaso qeyb gala aysan halkaas uga hadhine ay hayadiihi iyo bulshadi ay ka yimadeen uga sheekeyaan taarikhda Ogadeniya. Iyo halganka ay ku jiraan dadkaasi. Sida loo dhibateyo haweenka iyo caruurta. Sida wadankaas Media uga jirin oo cidi kaso waramin. iyo waxyaalo lamid ah.
OGADEN WOEM DAY.
Barnaamijyada ay dhalintu qabanayso ayaa mid kasta xaalad gooni ah looga hadla, Haweenka iyo caruurta oo ah dadka dhibatada Gumeysiga ugu badan soo gaadho ayay dhalintu u sameyeen maalin si khaasa loo xuso Dhibatada soo gaadha Haweenka Ogadeniya Sidoo kale kaalinta ay haweenka Ogadeniya ku dhex leeyihiin bulshada. Waxaa lasoo bandhiga wanaaga Hooyada Somaliyed ay leedahay iyo tixgalinta ay ku leedahay bulshada. Sidoo kale waxa laga hadla Gumeysiga sida uu isugu dayay inuu u burburiyo dhaqanka wanaagsan ee Somaliyed isaga oo la dagalamaya Hooyada oo ah Qoyska Somaliyeed meesha uu ka dhisanyahay kuna taaganyahay.
Waxaa mucjiso ku noqotay dadka Ajaanibta ree australiya ee casharada lasiiyay dhaqanka wanaagsan ee haweenka iyo xurmada ay somalida Ogadeniya u qabaan Haweenka.
Ogaden Culture Day.
Sidoo kale dhalinta ayaa soo bandhigta iyaga oo ku faanaya Hiddaha Iyo Dhaqankooda. Waxayna baraan oo soo bandhigaan ciyaaraha, cunnooyinka, dharka iyo dhamaanba waxa ummada Somalida Ogadeniya caanka ku tahay. Iyaga oo dhinaca kale dhexdooda abaabul u tahay ayaa hadana barnaamijyadan ay uga faa ideystaan in bulshada Ree australiyana labaro sumada iyo astaanta Ogadeniya ay leedahay. Somalida Ogadeniya ayaa leh dhaqan iyo hiddo soo jireen ah oo ay caalamka waxyaalo badan oo laga aqoon gooni u leeyihiin. Taas oo xiiso badan galisay martidan labarayo qadiyada Ogadeniya.
Dadka Ajanibiga ah ee Ree australiya markii ay dawadaan waxa dhacda inay aad uga helaan sawiraan badana ay ka qaataan iyo filimaan kuwaas oo Ay sii fidiyaan. oo lagu dhajisto xafiisyadooda ama lagu soo dawaco Journalada iyo megazineka wadamadaas.
Dhalinyarta ayaa sidoo kale barnaamijyadan ay sameyaan ka sameeya dhaqaale ay ku taakuleynayaan dadka dhibaateysan ee qaxoontiga ah. ama caruurta iyo hooyoyinka dhibaatada kasoo gaadhay gumeysiga.
Ogaden Refugee Day.
Waxaa hadaba dhalinta lagu casuumay Bandhigyada waaweyn ee wadanka Australiya, Newzealand ka dhaca. sida Refugees Day, oo ah maalin lasoo baxo oo dadka Australiya u doodaan dadka qaxootiga ah. Waxa Jaaliyada iyo ururada bulshada oo hormuud ka yihin OYSU ay ka qeyb galaan banaanbaxyadan. Waxayna soo qaataan calamo iyo musawiro muujinaya waxyeelada gumeysiga Ethiopia iyo dadaalka ay ku jiraan Ummada Somalida Ogadeniya ee ay ku doonayso Xornimada.
Waxa ururkan oo qeyb ka ah dadaalka ay Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee wadamada Pacific ama gaar ahaan Australiya ay ka hirgaliyeen wadamadaas in Qadiyada Ogadeniya soo shaac baxdo oo dadka Ree Australiya ay si toos ah u aqoonsadaan Waxa Ogadeniya ay tahay iyo meesha ay ku taalo. Inkasto shaqadan ay tahay shaqo qabyo ah oo wali dadaalkeedu socdo sanado yar kadibna imaan doonto in qofkasta oo ku nool wadanka Pacific oggaado Halganka Ogadeniya iyo daggaalka xornimo doon ee kasocda taas oo ah guul dhalinta Ogadeniya ee Pacific ay soo hooynayaan.
Dhalinta Pacific ayaa dadaalkooda oo dhan isugu geeyay sidii Qadiyada Ogadeniya loo soo shaac bixin lahaa Caalamkuna u baran lahaa OGADENIYA. Waxayna durba kasoo hooyeen dadaal midho dhalay oo ay ku muteysteen bilado dahabi ah.
dadaalka Dhalinta OYSU PACIFIC halkaas kaliya kuma uu eka ee waxa shaqooyinkooda ka mid ah shaqoyinki lagu abaabulayay bulshada Somalida Ogadeniya iyo Somaliweyn. Sido kale midkii iyaga dhexdooda lagu carbinayay dhalinta oo lagu barayay qadiyadooda. Waxaana siminaaro Joogto ah ay ka qaataan jaaliyadaha iyo masuliyiinta Ururka JWXO.
Waxa tusaale usoo qaadan karna socdaalki Hoggaanka Arrimaha Dibada JWXO Mudane Cabdi Raxmaan Mahdi ku tagay Australiya iyo kulamdi uu la qatay dhalinta.
Qoralada Soo socda Waxa ku eegi doona Xubno kamid ah ururka oo wareysiyo aan ka qaadnay. ama kasoo xiganay shaqoyinka ay u hayaan Ururka OYSU Pacific.